ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်ထုတ်ကုန်စက်ရုံ
မွန် - မနက် ၇း၀၀ မှမနက် ၉း၀၀ နာရီ
Tris (2-butoxyethyl) Phosphate-TBEP
Tris (2-chloroethyl) ဖော့စဖိတ် - TCEP
Tri-isobutyl ဖော့စဖိတ် -TIBP
Triphenyl ဖော့စဖိတ် -PPP
Tris (1,3-dichloro-2-propyl) ဖော့စဖိတ် -TDCPP
Trimethyl ဖော့စဖိတ် -TMP
Tris (2-chloroisopropyl) Phosphate-TCPP
Triethyl ဖော့စဖိတ် -TEP
Tricresyl ဖော့စဖိတ် - TCP
Triaryl ဖော့စဖိတ် Iospropylated-IPPP
Dimethyl Thio toluene အချင်း -DMTDA
Cresyl Diphenyl ဖော့စဖိတ် - CDP
Trixylyl ဖော့စဖိတ် -TXP
Tri (2-ethylhexyl) ဖော့စဖိတ် - TOP
Tri (2-ethylhexyl) ဖော့စဖိတ်
Cresyl Diphenyl ဖော့စဖိတ်
Dimethyl Thio toluene အချင်း
မော်လီကျူးအလေးချိန် 34 434,64
အရောင်မဲ့， ပွင့်လင်းအဆီပြန်အရည်， bp216 ℃℃ 4mmHg，， c viscosity 14 cp （20 ℃)，
အလင်းယိုင်အညွှန်းကိန်း 1.4434 （20 ℃℃။
CAS အဘယ်သူမျှမ။ : 25155-23-1
1. မော်လီကျူး: CHCHO (C6H5O) PO
Flash Poin: 20220 ℃
အက်စစ်တန်ဖိုး (mgKOH / g): .10.1
အထူးဆွဲငင်အား (20 ℃): 1.205--1.215
အရောင်တန်ဖိုး (APHA): ≤80
ရေပါ ၀ င်မှု%: .10.1
1. ပစ္စည်းဥစ္စာများ - ၎င်းသည်အရောင် (သို့) အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ပွင့်လင်းသောအရည်ဖြစ်ပြီးဖင်နိုလစ်အနံ့အနည်းငယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ အော်ဂဲနစ်အရည်ပျော်ရည်ကဲ့သို့သောအရက်၊ အီအီဘင်ဇင်၊ အက်တတွန်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစိုဓာတ်နှင့်တွေ့ဆုံပြီးခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကိုစုပ်ယူနိုင်ပါကဖင်နိုလစ်ကိုအခမဲ့ခွဲထုတ်နိုင်သည်။ 2. CAS အမှတ်: 101-02-0 3. သတ်မှတ်ချက် (စံ Q / 321181 ZCH005-2001 နှင့်ကိုက်ညီ) အရောင် (Pt-Co): ≤50သိပ်သည်းဆ: 1.183-1.192 တုံ့ပြန်မှုအညွှန်းကိန်း: 1.585-1.590 Solidification point ° C: 19-24 အောက်ဆိုဒ် (Cl-%):
Dimethyl Thio toluene အဘယ်သူမျှမ CAS အမှတ် .: 106264-79-3
Diamine အကြောင်းအရာ (%) ≥ .0098.00
TDA အကြောင်းအရာ (%)： ၁.၀၀
ရေအကြောင်းအရာ (%) ：0.10
Amine တန်ဖိုး (mgKOH / g)： 515-535
Detda စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုနှင့်အတူပေးအပ်ခြင်း, Zhangjiagang Fortune Chemical Co. , Ltd, သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိအလွန်ကောင်းသော detda ထုတ်လုပ်သူများထဲမှ၊ ၎င်း၏စက်ရုံမှ detda အမြောက်အများကို ၀ ယ်ရန်သင့်အားစောင့်နေသည်။ ၁. မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C11H18N2 ၂။ မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၁၇၈.၂၈၈.CAS အမှတ် - ၆၈၄၇၉-၉၈ - ၁၄ ။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - က) အသွင်အပြင်： - အဝါရောင်ပွင့်လင်းမြင်သာသောငွေရည်) သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း - ၉၈% မိနစ် GCSpecific Content မှ ၉၈% - ၃.၅ - ၃ ။ diethyl toluene － 2,4 － diamine: 75.5－81.0% 3,5-diethyl toluene － 2,6 － diamine: 18.0－20.0% ဂ) အခြား Alkyl amines အကြောင်းအရာ: ...
Zhangjiagang Fortune Chemical Co. , Ltd သည် tetraethyl silicateprice တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုနှင့်အတူတရုတ်နိုင်ငံရှိအလွန်ထူးချွန်သော ethyl silicate ထုတ်လုပ်သူများထဲမှသင့်အား၎င်း၏စက်ရုံမှ ethyl silicate အမြောက်အများကို ၀ ယ်ရန်သင့်အားစောင့်နေသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမည် Ethyl Silikat Synonyms tetraethyl silicate CAS NO ။ 78-10-4 အရည်အသွေးညွှန်းကိန်းသတ်မှတ်ချက်များအဆင့် -၄၀ အဆင့် -၂၂ အဆင့် -၂၈ အသွင်အပြင်အရောင်ဖျော့ဖျော့အရည်အရောင် (APHA) 30 max Density 20 ° C (68 ° F) 1.05-1.07 0.97-1.0 0.934-0.936 Silica အကြောင်းအရာ w ။ ..
ဖော်ပြချက်: 9-ANTHRALDEHYDE သည်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလင်းနှင့်ထိတွေ့သောအခါ၎င်းသည်ပြိုကွဲပျက်စီးသွားပြီးနိုးထမှုတစ်ရာတစ်ရာဖြစ်စေရန်ခရိုမီယမ်အောက်ဆိုဒ်ကဓာတ်တိုးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အဝါရောင်ကြည်လင်သည်။ 9-ANTHRALDEHYDE ၏အရည်ပျော်မှတ်သည် ၁၀၄-၁၀၅ ℃ဖြစ်သည်။ ကုန်ကြမ်းများ - အဝါရောင်ဖော့စဖရပ်ရပ်၊ ကလိုရင်းအရည်။ ထုတ်ကုန်ဆိုးဆေးများ၊ ဆေးဝါးများနှင့်အခြားအလယ်အလတ်ပစ္စည်းများ။ ၎င်းသည် ၂၁၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အရည်ပျော်ပြီး ၃၅၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ အရက်၊ ဘင်ဂျင်၊ ကလိုရိုဖိုကဲ့သို့သောအော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်အများစုတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။
Tributoxy Ethyl ဖော့စဖိတ်
Tributoxy ethyl phosphate စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုနှင့်အတူ Zhangjiagang Fortune Chemical Co. , Ltd သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိ tributoxy ethyl phosphate ထုတ်လုပ်သူများထဲမှအမြောက်အများ tris (2-butoxyethyl) phosphate, tbep, kp-140, 78-51 ကိုဝယ်ရန်စောင့်နေပါတယ်။ -3 က၎င်း၏စက်ရုံဖွဲ့စည်း။ 1 yn သွင်ပြင်လက္ခဏာများ - TBEP, Tris (2-butoxyethyl) phosphate2 ။ မော်လီကျူးအလေးချိန်: 398,483 ။ CAS NO .: 78-51-34． မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C18H39O7P5．Specificaionts: ပုံပန်းသဏ္lessာန် - အရောင်မဲ့ orlight- အဝါရောင်ပွင့်လင်းသောအရည်RefractiveIndex ...
Tris (2-chloroisopropyl) ဖော့စဖိတ်
ဖော်ပြချက်: Tris (2-chloropropyl) ဖော့စဖိတ်သည်မီးလျှံနှောင့်နှေးစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်မော်လီကျူးအလေးချိန်အနိမ့်မော်လီကျူးအလေးချိန်ဟလိုဂျင်ဖော့စဖရပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့် polyvinyl chloride, polystyrene, phenolic resin, acrylic resin, ရာဘာများတွင်အသုံးပြုသည်။ Polyurethane ပျော့ပျောင်းသောအမြှုပ်များ၊ တင်းကျပ်သောအမြှုပ်များနှင့်ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များတွင်လည်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသောကုတ်အင်္ကျီများနောက်ကျခြင်း။ ၎င်းသည်ပလပ်စတစ်ဆေးရည်လည်းဖြစ်သည်။ Tris (2-chloropropyl) phosphateis ကိုပေါင်းစပ်ပြီး halogenated phosphate flame retardant and plasticizer အဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။
Triethyl phosphate စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုနှင့်အတူ Zhangjiagang Fortune Chemical Co. , Ltd, သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးသော triiethyl phosphate ထုတ်လုပ်သူများအနက် 78-40-0, ethyl phosphate, phosphoric ether, tep ကို၎င်း၏စက်ရုံမှဝယ်ယူရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ 1.Synonyms: Ethyl ဖော့စဖိတ်; TEP; Phosphoric Ether2.Molecular ဖော်မြူလာ: (CH3CH2O) 3PO 3. မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၁၈၂.၁၄၁၄.CAS အမှတ်။ : ၇၈ - ၄၀ - ၅၀.၃ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - ပုံပန်းသဏ္transparentာန်ပွင့်လင်းမြင်သာသောအရည် ...
Tris (2-chloroethyl) ဖော့စဖိတ်
Zhangjiagang Fortune Chemical Co. , Ltd သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိအလွန်ထူးကဲသော (2-chloroethyl) ဖော့စဖိတ်ထုတ်လုပ်သူများထဲမှ tris (2-chloroethyl) ဖော့စဖိတ်စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုနှင့်အတူပံ့ပိုးပေးခြင်းသည်သင်အားအမြောက်အများ 115-96-8-8, tris (β) ဝယ်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ -chloroethyl) ဖော့စဖိတ်, tcep ၎င်း၏စက်ရုံဖွဲ့စည်းရန်။ 1. Synonyms: TCEP, tris (β-chloroethyl) phosphate2 ။ မော်လီကျူးဖော်မြူလာ: C6H12CL3O4P3 ။ မော်လီကျူးအလေးချိန်: 285,54 ။ CAS အဘယ်သူမျှမ။ : 115-96-85 ။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Appearance Colorless ...
ZHANGJIAGANG FORTUNE CHEMICAL CO ။ , LTD